चीन भ्रमणमा परराष्ट्र मामिला र प्रेस सल्लाहकार छुटे, आसेपासे कसरी परे ? – Vishwanews.com : Popular Nepalese News Media in New York, USA
Home / News / समाचार / चीन भ्रमणमा परराष्ट्र मामिला र प्रेस सल्लाहकार छुटे, आसेपासे कसरी परे ?
चीन भ्रमणमा परराष्ट्र मामिला र प्रेस सल्लाहकार छुटे, आसेपासे कसरी परे ?
March 20, 2016 समाचार Leaveacomment
चैत ७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली साताव्यापी औपचारिक भ्रमण सुरुमै विवादित बनेको छ । कहिले व्यवसायीसँग रकम मागेको काण्डले त कहिले नेपालको हवाई क्षेत्रको नियमक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान अनुमति प्रमाणपत्र (एओसी) जारी गर्नुभन्दा पहिले अनिवार्य गरिनुपर्ने प्रुभिङ फ्लाइट (प्रमाणित उडान) नभएको वायुसेवाबाट चीन जान गर्न लागेकाले उनी विवादमा तानिरहे ।
आइतबार निकै जम्वो टोलीसहित चीन हानिए । त्यतिबेला पनि ओलीको आलोचना चर्कोरुपमा भयो । ओलीले भ्रमणमा छुटाउनै नहुने व्यक्तिलाई नलगि अनावश्यक व्यक्तिहरुलाई लिएर गएको चर्चाले पनि ओलीको चीन भ्रमण थप खल्लो बन्यो ।
प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा छुट्नै नहुने प्रमुख व्यक्ति परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार गोपाल खनाललाई नै छुटाएका छन् । साता व्यापी विदेश भ्रमण त्यो पनि परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारको अनुपस्थितीमा कस्तो होला ? अहिले चर्चा सुरु भएको छ । यद्यपि सल्लाहकार खनालले भने नेपालमा नै धेरै काम परेर नगएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा खनालमात्र होइन प्रेस संयोजक प्रमोद दाहाल पनि परेनन् । तर, ओलीको भ्रमणमा उनका आसेपासे र पैसावाल भने परेका छन् ।
Previous काभ्रेमा गोली चल्यो, २० वर्षीय तामाङको मृत्यु
Next उडान प्रमाणित नभएको जहाजबाट प्रम चीन सरर्, निगम कर्मचारीको विरोध